Ofdị ihu igwe: njirimara na nhazi | Netwọk Mgbasa Ozi
Dika anyi matara, rute ugbu a anyi huru ndu na mbara uwa anyi ma obu n'ihi mpaghara nke ya na Sun. Anyi no na ihe ndi sayensi na-akpo "ebe obibi". N'ihi nke a ikuku ugbua ozone oyi akwa Anyị nwere ike ịdị ndụ. Haswa mepụtara dị iche iche ụdị ihu igwe dabere na oke okpomọkụ anyị na-agagharị. N’adịghị ka ọnọdụ okpomọkụ anyị na-ahụ n’ebe fọdụrụ nke usoro mbara igwe, ụwa anyị na-agagharị na oke ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala.
N’isiokwu a, anyị nwere ike ịmụ gbasara ụdị ihu igwe dị iche iche na mbara ụwa anyị na ihe njiri mara nke ọ bụla nwere. You chọrọ ịmatakwu banyere ya?
1 Kedu ka ihu igwe dị?
2 Pesdị ihu igwe dịka ihe dị n'ụwa
2.1 Oge na-ekpo ọkụ
2.2 Ọnọdụ ihu igwe na-agwụ ike
2.3 Oge oyi
Kedu ka ihu igwe dị?
Ọ bụ ihe dị njọ iji megharịa ihu igwe na ihu igwe. A ghaghị ịghọta ọdịiche dị iche iche nke echiche ndị a nke ọma ka o wee ghọta ya nke ọma. Mgbe anyị lere nwoke ihu igwe anya wee gwa anyị na n'ime ụbọchị abụọ mmiri ga-ezo na a ga-enwe oke ikuku nke 50 km / h, ọ na-ekwu maka ihu igwe. Na nke a, anyị na-enyocha ihe Ọnọdụ ikuku nke ga-eme n'oge na ebe ọ bụla. Nke a bụ akụkụ nke amụma ihu igwe nke, ekele maka ọtụtụ nke Ngwa igwe, can nwere ike ịmata oke ntụkwasị obi nke ga - eme.
N'aka nke ọzọ anyi nwere ihu igwe. Enwere ike ịkọwa ihu igwe dị ka usoro nke mgbanwe nke na-adịgide adịgide n'oge oge. N'ezie na nkebi ahịrịokwu a ị gaghị achọpụta ihe ọ bụla. Anyị ga-akọwa ya nke ọma na omimi. Mgbanwe ihu igwe dị okpomọkụ, larịị nke mmiri ozuzo (ma obu mmiri ozuzo ma obu nieve), oké ifufe regimes, ifufe, ikuku ikuku, wdg. Ọfọn, set nke mgbanwe ndị a niile nwere ụkpụrụ n'ime afọ kalenda. A maara ha dị ka ndị na-achịkwa ihu igwe.
A na-edekọ ụkpụrụ niile nke mgbanwe ihu igwe dị iche iche, enwere ike nyochaa ya n'ihi na ha nọ n'otu ụzọ ma na-enyocha ya na ihe osise. Dịka ọmụmaatụ, na Andalusia enweghị okpomọkụ ọ bụla edere n'okpuru -30 degrees. Nke a bụ n'ihi na ụkpụrụ okpomọkụ ndị a adabaghị na ihu igwe Mediterranean. Ozugbo anakọtara data niile, a na-edepu ugwu dị ka ụkpụrụ ndị a si dị.
Ejiri ikuku oyi, ifufe siri ike, ọdịda dị n'ụdị snow, wdg. Njirimara ndị a na-eme ka a kpọọ ha pola ihu igwe.
Pesdị ihu igwe dịka ihe dị n'ụwa
A pụghị ịkọwa ihu igwe nke ụwa dịka mgbanwe nke ihu igwe ndị a kpọtụrụ aha n'elu, kamakwa ihe ndị ọzọ na-etinye aka dịka ha bụ elu na ohere ma ọ bụ ebe dị anya maka oke osimiri. Na nhazi nke a, anyị ga - ahụ ụdị ọnọdụ ihu igwe dị na njirimara onye ọ bụla. Na mgbakwunye, nke ụdị ụdị ihu igwe ọ bụla dị n'ụdị nkọwapụta zuru ezu karị na-eje ozi obere obere.
A na-eji ọnọdụ okpomọkụ dị elu mara ugwu ndị a. Ogologo okpomọkụ kwa afọ dị ihe dị ka ogo 20 ma ọ bụ naanị nnukwu ọdịiche dị n'etiti oge. Ha bụ ebe a na-enwe ahịhịa na nnukwu ọhịa iru mmiri na, n’ọtụtụ oge, nnukwu mmiri ozuzo. Anyị na-ahụ bụ subtypes:
Ọnọdụ ikuku ụwa. Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ ihu igwe na-agbatị n’elu akara ụwa. Mmiri mmiri ozuzo na-aba ụba n'oge niile n'afọ, enwere oke iru mmiri na ọ na-ekpo ọkụ mgbe niile. A na-ahụ ha na mpaghara Amazon, Central Africa, Insulindia, Madagascar na Yucatan Peninsula.
Ihu igwe. O yitere ihu igwe gara aga, naanị na ọ gbatịrị n'ahịrị nke ogbe Cancer na Capricorn. Nanị ihe dị iche bụ na ebe a mmiri ozuzo bara ụba naanị n'oge ọnwa ọkọchị. Enwere ike ịchọta ya na Caribbean, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, ụfọdụ akụkụ South America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, akụkụ nke Australia, Polynesia, na Bolivia.
Udiri udu mmiri. Typedị ihu igwe a nwere ọnọdụ dịgasị iche iche na mmiri ozuzo dịgasị iche n'afọ. Enwere ike ịhụ ya na ndịda ọdịda anyanwụ North America, ndịda ọdịda anyanwụ Africa, akụkụ ụfọdụ nke South America, etiti Australia, na Middle East.
Ọzara na ọkara ọzara. Emere ihu igwe a site n'inwe okpomọkụ dị elu n'afọ niile na-egosi ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti ehihie na abalị. Enweghi iru mmiri ọ bụla, ahịhịa na fauna dị ụkọ ma mmiri ozuzo dịkwa ụkọ. Ha dị na etiti Eshia, Mongolia, ọdịda anyanwụ etiti North America, na etiti Africa.
Ọnọdụ ihu igwe na-agwụ ike
Ihe eji mara ha bu inwe onodu oku di gburugburu 15. N'ime igwe ndị a anyị nwere ike ịhụ oge nke afọ dị iche iche. Anyị na-ahụ ebe ndị ekesara n'etiti latitude n'etiti ogo 30 na 70 site na myirịta. Anyị nwere subtypes ndị a.
Ihu igwe Mediterranean. N'etiti njirimara ya bụ isi anyị na-ahụ oge ọkọchị akọrọ na anwụ na-acha, mgbe oge oyi na-ezo. Anyị nwere ike ịchọta ya na Mediterranean, California, ndịda South Africa, ndịda ọdịda anyanwụ Australia.
Ọnọdụ ihu igwe nke China. Typedị ihu igwe a nwere okpuru mmiri na-ekpo ọkụ na udu mmiri dị ezigbo oyi.
Oke ikuku. Ọ bụ nke a na-ahụ n’ógbè niile dị n’akụkụ mmiri. N'ozuzu, enwere igwe ojii na mmiri ozuzo mgbe niile, ọ bụ ezie na enweghị oge oyi ma ọ bụ oge ọkọchị nwere oke okpomọkụ. Ọ dị n'ụsọ Oké Osimiri Pasifik, New Zealand na akụkụ ụfọdụ nke Chile na Argentina.
Ọnọdụ ihu igwe. Ọ bụ ihu igwe dị n'ime ụlọ. A na-ahụ ha na mpaghara na enweghị oke osimiri. Ya mere, ha na-ekpo ọkụ ma dị jụụ na mbụ ebe ọ bụ na ọ nweghị oke osimiri nke na-arụ ọrụ dị ka ihe nhazi okpomoku. Typedị ihu igwe a kacha dị na etiti Europe na China, United States, Alaska na Canada.
N'ebe ndị a, okpomọkụ anaghị adịkarị karịa 10 Celsius ma enwere mmiri ozuzo n'ụdị snow na ice.
Oke ihu igwe. Ọ bụ ihu igwe nke okporo osisi ndị ahụ. Ihe ejiri mara ya bu inwe otutu okpomoku n’ile n’ile na enweghi ahihia ebe obu na ala na aru oyi.
Oke ugwu igwe. A na - ahụ ya na mpaghara ugwu niile dị elu ma nwee oke mmiri ozuzo na ọnọdụ okpomọkụ na - agbadata na ịdị elu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu ụdị ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Weatherdị ihu igwe
Ezigbo mma ma kọwaa nke ọma !! O nyeere m aka nke ukwuu! Daalụ!
Zaghachi Flor Gonzàlez
Daalụ, ọ nyeere m aka maka ọrụ m na clasroom -w-
Zaghachi Bella vk